Qorista xusuustaada intii aad joogtay xafiiska waxay faa’ido u noqoneysaa kan dambe… – Hagaag.com
Qorista xusuustaada intii aad joogtay xafiiska waxay faa’ido u noqoneysaa kan dambe…
Madaxda adduuunka ama qof walba oo ka shaqeeya meel xasaasi ah oo lagu kariyo siyaasada dalkaasi markii uu baneeyo kursiga wuxuu qoraa xusuustiisa intii uu joogay xafiiska, waxay soo bandhigaan dhaliil iyo wax qabadba, waxyaabihii la il duufo intii lagu guda jiray shaqada.
Hadaba madaxda ama Madaxweynayaashii Somalia ee soo maray ma jiraa qof qoray xusuustii kursigii uu ku fadhiyey shar iyo kheyrba, waan maqlay buug xasuustii M/weyne Cabdullahi Yuusuf Allaha u Naxariistee la qoray, laakin ma maqal ama ma arag buug ay qoreen madaxdii kale ee dalka soo maray.
Xusuusta oo la qoro waxay faa’ido u tahay madaxda dambe, waxay ka faa’ideysanayaan khaladaadkii la galay iyo sidii loo maamulay, waxay kaloo xasuusta wax ka tartaa dadka moog dhibka kursiga madaxtinimada markay aqriyaan waxay ogaanayaan in qofkaasi meel cidla ah laga xagxagtay, waxaa jira waxyaabo farabadan oo aan dadka caadiga ah lala wadaagi karin inta qofku kursiga ku fadhiyo oo aan aheyn sirta dalka, balse uu qori karo inta kale markuu kursiga baneeyo.
Madaxdu waxay la kulmaan madax caalami ah waxay ka wada hadlaan mararka qaar arrimo xasaasi ah oo uusan markaasi xaq u laheyn inuu faafiyo, arrimahaasi oo dhan waxaa la arki karaa markuu ka deggo kursiga, sidoo kale wuxuu la kulmayaa odayaal dhaqamedyo, culimo, haween, dhallinyaro iyo waxgarad oo kawada hadlay mowduucyo badan oo markaasi loo baahneyn in la faafiyo si aynan xaaasiyad u kicin.
Xusuusta oo la qoro waxay faa’ido u tahay dadka wax aqriya oo ogaanaya waxyaabaha ku gadaaman kursigaasi iyo sida diblomaasiyada u shaqeyso, wuxuu sawir ka bixinayaa madaxdaasi haddii ay u qoraan si ay ku dheehan tahay runtu ay oo lama taabtaan ah, inuu wadanku ku maamulay wado sax ah ama inuu khaladaad sameeyey, sameynta qaladku ma ahan ceeb waa wax wax laga barto si aanad ku dhicin mar kale, dadka ka dambeeyana wuxuu u noqonayaa dersi.
Dhanka kale Marwooyinka Madaxweynayaasha waxaa laga rabaa iyagana sidoo kale inay qoraan xusuuta intay ahaayeen marwada M/weynaha noloshooda, dhaqankooda, jeebkooda waxa iska bedelay, waxyaabihii ay goob jooga u ahaayeen macaan iyo qaraarba, Marwooyinkii ay la soo kulantay waxay ka soo baratay ama ay ka barteen, wadamadii ay tagtay waxay ku soo aragtay, intaasi oo dhan oo la qoro waxay bilaan wajiga Marwada Koowaad, haween badanna waxay u noqoneysaa ku dayasha haddii waxa ay soo qabatay yihiin wax la mahadiyey.
Soomaalidu haka baxdo hadalka oo ah mid la iska iloobo muddo gaaban, wax walba hala qoro, boqol sano kadib ayaa la aqrisan doonaa.